(Sawirro) Madaxweynaha Maamulka Puntland oo Maanta Hortagay Baarlamaanka Puntland - Radio Simba 95.0 MHZ - Simbanews - Idaacada Simba
(Sawirro) Madaxweynaha Maamulka Puntland oo Maanta Hortagay Baarlamaanka Puntland
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 26-10-2015 hortegey Golaha Wakiilada Puntland si uu uga jawaabo su’aalo ay qabeen mudanayaashu.
Mudanayaasha Baarlamaanka ayaa soo xaadiray kullanka, waxaana Goob joog ka ahaa Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Siciid Xaasan Shire , Labada Guddoomiye ku xigeen ee Baarlamaanka , Wasiiro iyo Bahda warbaahinta.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Siciid Xassan Shire oo ugu horeyn ka hadlay kullanka ayaa sheegay in maanta uu Madaxweynuhu ku yimi codsigii baarlamaanka ee shalayto xildhibaanadu codsadeen in madaxweynaha ay weydiiyaan, kuwaasi oo la xiriira howlaha qaran ee dalka ka socda.
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dhankiisa dhammaan mudanayaasha baarlamaanka uga mahadceliyey sida ay ugadanayaan waajibaadka qaran ee saaran, una sheegay in uu diyaarna u yahay inay weydiiyaan su’aalo .
Mudanayaasha Baarlamaanka ayaa madaxweynaha weydiiyey su’aalo, kuwaasi oo la xiriiray xaaladda guud ee dalka , barnaamjyada horumarineed , waxayna ku bogaadiyeen Madaxweynaha iyo xukuumadiisa dedaalka horumarineed ee ka soconaya guud ahaan Puntland oo maanta qaaday dhabada horumarka iyo wanaaga.
Hogaamiyaha Kacdoon Hir-Shabeelle oo Muqdisho Soo Gaaray